Madaxweynaha Galmudug oo dhagax dhigay waddooyin cusub +Sawirro – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Galmudug oo dhagax dhigay waddooyin cusub +Sawirro
Madaxweynaha Galmudug ayaa maanta dib ugu labatay Magalada Cadaado iyadoo halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyay, waxaana uu dhagax dhigay afar waddo oo laga hirgelinayo magaalada Cadaado.
Madaxweynaha waxaa safarkiisa ku wehliyay xubnaha aqalka sare ee dhawaan lagu doortay Cadaado, iyagoo Jowhar uga qeybgalay dorshadii Madaxweynah Hirshbelle.
Madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed ayaa markale hambalyo u diray madaxweynaha Hirshebelle Cali Cabdulahi Cosoble iyo Ku xigeenkiisa Guudlawe
Waxa uuna ugu baaqay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif in uu taageero Maamulka Hirshabelle uuna garab istaago.
“waxaan ogahay ugaaska in uu yhay ugaaska ugu facaweyna ugaasyada Soomaliyeed ahna nin aad u qiima badan maantana looga bahanayahay in uu tageero maamulkaasna kala shaqeeyo midnaimada shacabaka labada Gobolka” ayuu yiri C/kariin Guuleed.
Wasaaradda Maaliyadda oo shirkad gaar ah u xilsaartay qaadista canshuuraha Gaadiidka
Taliyaha Booliska Soomaaliyeed oo tababbar u furay cutubyo ka tirsan booliska “SAWIRRO”
Taliyaha Booliska Soomaaliyeed oo tababbar u furay cutubyo ka tirsan booliska "SAWIRRO"